पुर्ब डीआईजी रमेश खरेलले अब ‘हाम्रो नेपाल सुशासन अभियान’ चलाउने ! « Online Tv Nepal
पुर्ब डीआईजी रमेश खरेलले अब ‘हाम्रो नेपाल सुशासन अभियान’ चलाउने !
Published : 11 March, 2020 4:41 pm
नेपाल प्रहरीका भुतपूर्व डीआईजी रमेशप्रसाद खरेलले ‘हाम्रो नेपाल सुशासन अभियान’ अघि बढाउने भएका छन् । उनको नेतृत्वमा सुरु हुन लागेको अभियानको बिहीबार घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । खरेलले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै यसको जानकारी दिएका हुन् । त्रिपुरेश्वरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन उनले सबै शुभेच्छुक र समर्थकलाई आमन्त्रण गरेका छन् ।
खरेलले यसअघि ‘हाम्रो नेपाली हाम्रो नेपाल’ नामको अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।तर युवा अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीसँग कुरा नमिलेपछि अन्तिम समयमा उनी सो अभियानबाट पछि हटेका थिए । खरेलको नयाँ अभियानमा देवेन्द्र सिटौला, डा. नारायण घिमिरे, राजकुमार यादवलगायत छन् ।
खरेलले यो अभियान राजनीतिक नभई पूर्णरुपमा सामाजिक हुने बताए । ‘हामीले राजनीति गर्न होइन, सुशासनका लागि सरकारलाई घच्घच्याउन र जनतालाई शशक्तिकरण गर्न अभियान सुरु गर्न लागेका हौं,’ उनले भने । भोलिको कार्यक्रममा संगठनको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिने छ ।